တောင်ပေါ်က တယောသံ – AnZarTone
“ဒါနဲ့ကွာ၊ ငါလည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး အဲ့ဒီ သရဲကို ဓာတ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးလိုက်တယ်ကွာ”
လူရွယ်သည် ဆက်လက် ပြောခြင်း မပြုသေးဘဲ ကြွက်ကြော်အား တစ်ကိုက်ကိုက်ပြီး ထန်းရည်အား ဂွက်ခနဲ မော့လိုက်ပြန်လေ၏။ ပြီးနောက် “ဟေ့ကောင်တွေ၊ ထန်းရည်က ကုန်တော့မယ်ဟ၊ ငါ့မှာလည်း ပိုက်ဆံက ကုန်ပြီး ဘယ်လို လုပ်ကြမတုန်း” ဟူ၍ စောစောက ပြောသည့် စကားနှင့် မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော စကားများကို ပြောဆိုလိုက်လေ၏။ ထိုအခါတွင် ကျန်လူများမှာ လူရွယ် ပြောသည့် စကားအား ဂရုထားခြင်း မပြုဘဲ “မင်း ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်လိုကြီး တွေ့ရတုန်း၊ အမွှေးဖွားဖွားနဲ့ နီနီစုပ်စုပ်ကြီးလား” ဟူ၍ မေးမြန်းကြလေ၏။
ထိုတောင်သည် အမြင့်အားဖြင့် မနိမ့်လွန်း၊ မမြင့်လွန်းပေ။ ထိုတောင်ပေါ်၌ ထုံးဖြူဖြူ စေတီတစ်ဆူလည်း တည်ထားလေ၏။ သို့ရာတွင် ထိုတောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်၍ ဘုရား ဖူးမြော်သူမှာ နည်းပါး၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုတောင် ပတ်လည်တွင် ချုံပုတ်များ၊ ဆူးရှိသည့် အပင်များ များစွာ ပေါက်ရောက်နေသည့် အပြင် လူသွားလမ်း ဟူ၍ ကောင်းစွာ မရှိသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
ထိုတောင်၏ မြောက်အရပ် နှစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင်မူ ရွာငယ်တစ်ရွာ ရှိလေသည်။ ထိုရွာငယ်၏ အမည်မှာ ရွက်လှရွာ ဟူ၍ တွင်လေ၏။ ထိုရွာမှ ရွာသူရွာသားများမှ ထိုတောင်အား ရန်အောင်တောင် ဟူ၍ ခေါ်တွင်ကြလေ၏။ ယင်းအမည်တွင်ရခြင်း အကြောင်းမှာလည်း ယခင်က ထိုတောင်ပတ်လည်တွင် တည်ရှိသော မြေပဲ၊ နှမ်းများ စိုက်ပျိုးသည့် ယာခင်းများမှာ ဦးရန်အောင် ဟူသော လူကြီးတစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်လေသောကြောင့် ထိုတောင်ကိုလည်း ဦးရန်အောင် တောင်ဟူ၍ နောက်ပြောင် ခေါ်ဝေါ်သည်မှစ၍ ရန်အောင်တောင် ဟူသောအမည်မှာ တွင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
ထိုတောင်ပေါ်တွင် တည်ထားသော ထုံးဖြူဖြူ စေတီလေးကိုလည်း တောင်၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍ပင် ရန်အောင်စေတီ ဟူ၍ ခေါ်တွင်လေ၏။ ထိုစေတီလေးအား မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အခါ၌ မည်သူ တည်ထားခဲ့သည်ကို မည်သူမှ အတိအကျ မသိကြပေ။ ထိုစေတီနှင့် ထိုတောင်တွင် အစောင့်အရှောက်များ၊ ဥစ္စာစောင့်များ ရှိသည်ဟူ၍လည်း ထိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများတွင် သတင်းကြီးလေ၏။ ယင်းအချက်သည်လည်း ထိုတောင်ပေါ်သို့ အသွားအရောက် နည်းခြင်း အကြောင်းအချက် တစ်ခု ဖြစ်၍ နေပေတော့၏။
ရန်အောင်တောင်နှင့် မလှမ်းမကမ်း အရပ်တွင် ဦးသာအောင် ဟူသော အဖိုးကြီးတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့် ယာတစ်ကွက် ရှိလေ၏။ ထိုအဖိုးကြီးသည် ၎င်း၏ ယာကွက်အတွင်း ၎င်းနေထိုင်ရန်အတွက် တဲငယ်တစ်လုံး ဆောက်လုပ်ထားလေ၏။ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ ရွက်လှ ရွာသားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ ရွာအတွင်း ဆူညံလှသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော ယာကွက်အတွင်း ယင်းကဲ့သို့ တဲငယ်တစ်လုံး တည်ဆောက်၍ နားအေးပါးအေး ဆိုသကဲ့သို့ပင် တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်လေ့ ရှိလေသည်။
အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ ညခင်း မှောင်ရည်စပျိုးချိန်တွင် ရွာမှ ၎င်း၏ မြေးဖြစ်သူ မောင်အောင်ဦး လာရောက်ပို့ပေးသည့် ထမင်းအား မြိန်ယှက်စွာ စားသောက်လေ့ ရှိ၏။ ပြီးနောက်တွင် ခံတွင်းချဉ်ခြင်းအား ဖြေဖျောက်ရန် အလို့ငှာ ပြောင်းဖူး ဆေးလိပ်ကြီးအား မီးတရဲရဲဖြင့် ဖွာရှိုက်လေ့ ရှိပြန်၏။ ယင်းနောက်တွင် မူကား အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ အိမ်ယာ ဝင်လေ့ ရှိလေသည်။
ဦးသာအောင်မှာ ည သန်းခေါင်ယံ အခါတွင် တစ်ရေးနိုးလေ့ ရှိ၏။ ထိုအခါ အပေါ့အပါး သွား၍ ၎င်း၏ တဲအရှေ့ရှိ ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ဓာတ်ဗူးအတွင်း အဆင်သင့် ထည့်ထားသော ရေနွေးကြမ်းအား ဇိမ်ခံ၍ သောက်နေတတ်လေသည်။ ဤနေရာတွင် ဖြည့်စွက်၍ ပြောရပါလျှင် ဦးသာအောင်မှာ ကြောက်တတ်သူတစ်ယောက် မဟုတ်ပေ။ ဥစ္စာစောင့်များ ရှိသည်ဟူ၍ နာမည်ကြီးသော တောင်အနီးတွင် တစ်ယောက်တည်း ညအိပ်ညနေ နေထိုင်သည်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့်ပင် ဦးသာအောင်မှာ တော်ရုံ ကြောက်တတ်သူ စာရင်းတွင် မပါဝင်ကြောင်းကို စာဖတ်သူတို့ သတိပြုမိပေလိမ့်မည်။
အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်၏ မြေးဖြစ်သူ မောင်အောင်ဦးသည် နေ့စဉ် ညနေချိန်တိုင်းတွင် ဦးသာအောင်အတွက် ထမင်း လာရောက်၍ ပို့လေ့ ရှိလေသည်။ တစ်ခုသော နေ့တွင်မူ မောင်အောင်ဦးသည် ရွာသို့ မပြန်တော့ ဟူ၍ ပြောကာ ဦးသာအောင်နှင့်အတူပင် အဆိုပါ တဲကလေး၌ အိပ်စက်ခဲ့လေသည်။ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ ၎င်း၏ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုသကဲ့သို့ပင် သန်းခေါင်းယံ အချိန်၌ နိုးလာခဲ့၍ တဲကလေး အရှေ့ရှိ ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် အေးအေးလူလူ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ရင်း ရေနွေးကြမ်း သောက်နေလေသည်။
မောင်အောင်ဦးသည် ဦးသာအောင် နိုပြီး အတန်ငယ် ကြာသောအခါ ၎င်းသည်လည်း တစ်ရေးနိုး နိုးထလာခဲ့လေ၏။ မောင်အောင်ဦးသည် နိုးထကာစတွင် တဲအရှေ့ ကွပ်ပျစ်ပေါ်၌ ထိုင်လျက် ရှိသော ၎င်း၏ အဖိုးဖြစ်သူအား သရဲ ဟူသော အမှတ်ဖြင့် ကြောက်ရွံ့နေသေး၏။ သို့ရာတွင်မူ ၎င်း၏ အဖိုးမှန်း သိသွားသောအခါတွင် အိပ်ယာမှ ထ၍ အဖိုးဖြစ်သူထံ သွားရောက်၍ ထိုင်နေလေ၏။
“ဘယ်လိုတုန်း ငါ့မြေးရဲ့၊ တစ်ရေးနိုးလာတာလားကွ”
“ဟုတ်တယ် အဘ၊ ဒါနဲ့ အဘကလည်း ညကြီးမင်းကြီး တစ်ယောက်တည်း ဘာလို့ ထိုင်နေတာတုန်း၊ ခုဟာက ရွာထဲလည်း မဟုတ်ဘူး၊ တောထဲ အဘရဲ့”
“ဟ … ငါ့မြေးကလည်း၊ တောထဲနေနေ ရွာထဲနေနေ ညဟာ ညပါပဲကွ၊ တောထဲက ရွာထဲထက် ပိုပြီးတောင် လေကောင်းလေသန့် ရပါသေးတယ်ကွာ”
“အဘ ကလည်းဗျာ၊ ကျုပ်က လေကောင်းလေသန့် ရတာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ တောထဲဆိုတော့ … ဟိုလေ .. သရဲတွေ ရှိတယ်ဗျ”
ဟူ၍ မောင်အောင်ဦးသည် ဘေးဘီဝဲယာ ပတ်ဝန်းကျင်အား ကြောက်ရွံ့သော မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်ရင်း ၎င်း၏ အဖိုးဖြစ်သူ ဦးသာအောင်အား တိုးညှင်းစွာ ပြောလိုက်လေ၏။
ထိုအခိုက် တိုက်ဆိုင်စွာပင် အစောင့်အရှောက်များနှင့် ဥစ္စာစောင့်များ ရှိသည်ဟူ၍ နာမည်ကြီးလှသော ရန်အောင်တောင်ပေါ်မှနေ၍ လွန်စွာ လွမ်းဆွေးဖွယ် ကောင်းလှသော တယောသံသည် ည သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် ထူးဆန်းစွာ ပေါ်ထွက်လာလေတော့၏။
ထိုအသံကို ကြားသောအခါ မောင်အောင်ဦးမှာ ကြက်သီးများပင် ထသွားပြီး ၎င်း၏ အဖိုးဖြစ်သူနားသို့ တိုး၍ ကပ်ထိုင်ကာ တိုးညှင်းစွာ မေးမြန်းလေ၏။
“အဘ၊ အဲ့ဒီ အသံက တောင်ပေါ်က လာတာလားဟင်”
ယင်းသို့ မေးလိုက်သောအခါတွင် အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှ အေးဆေးစွာပင် –
“ဟုတ်တယ်လေ ငါ့မြေးရဲ့၊ တောင်ပေါ်က လာတာပဲကွ၊ တော်တော် လွမ်းစရာ ကောင်းသံ လက်သံပဲ ငါ့မြေးရဲ့”
ဟူ၍ ပြောလေရာ မောင်အောင်ဦးမှာ ၎င်း၏ အဖိုးဖြစ်သူ၏ အေးဆေးနေသော ဟန်အမူအယာကို အားမလို အားမရ ဖြစ်သွားပြီးနောက် –
“ဟာဗျာ အဘကလည်း၊ လက်သံက ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း၊ အဲ့ဒါ သရဲ ခြောက်တာဗျ”
– ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှာ ၎င်း၏ မြေးဖြစ်သူ မောင်အောင်ဦးအား ကြည့်၍ တခွီးခွီး ရယ်မောလိုက်ပြီး –
“ဟားဟား … ငါ့မြေးနိုင်ရောကွယ်၊ သရဲ နေနေ ဘာနေနေပေါ့ကွာ၊ အဘ က လက်သံ ကောင်းလို့ ကောင်းကြောင်း ပြောတာပဲ၊ အဲ … ပြောရရင်၊ အဲ့ဒီ လက်သံလေးကို နားထောင်ချင်လို့ အဘက အခု ထိုင်နေတာပဲ ငါ့မြေးရဲ့”
ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ မောင်အောင်ဦးမှာ အဖိုးဖြစ်သူ၏ စကားအား အံ့အား သင့်၍သွားလေတော့၏။
“ဗျာ …..။ အဘ က အဲ့ဒီ အသံကို အရင်ကလည်း ကြားနေရတာပေါ့နော်”
“ဟုတ်တယ်လေ ငါ့မြေးရဲ့၊ အရင်ကလည်း ကြားနေရတာပဲကွ”
“ဟာ … ဒါဆို အဘ ကို အဲ့ဒီ တောင်ပေါ်က သရဲက အဘ နေကတည်းက နေ့တိုင်း ခြောက်နေခဲ့တာပေါ့”
“အမလေး … ငါ့မြေးရယ်၊ အသံကြားရတိုင်း သရဲ ခြောက်တယ်လို့ချည်း ပြောနေတော့တာပါပဲလားကွ၊ ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ် ငါ့မြေးရေ၊ အဲ့ဒီ အသံကို အဘ ကြားရတာ အဘ တစ်ယောက်တည်း ဟောဒီနေရာလေးကို လာနေကတည်းက မဟုတ်ပါဘူးကွယ်၊ ဒီအသံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်၊ ၁၅ ရက်လောက်ကမှ ကြားရတဲ့ အသံပါကွ”
ဟူ၍ အဖိုးကြီးမှ ပြောလိုက်သော်လည်း မောင်အောင်ဦးမှာ တိုးလိုက် မြင့်လိုက်ဖြင့် ထွက်ပေါ်လာနေသော တယောသံအား သရဲ ခြောက်သည်ဟူ၍သာ ကြောက်ရွံ့နေသည့်အတွက် မိမိ ယခုကဲ့သို့ လာရောက် အိပ်မိခြင်းကိုပင် နောင်တရနေသကဲ့သို့ ရှိနေလေတော့သည်။ ထိုအခြင်းအရာအား ရိပ်မိသော အဖိုးဖြစ်သူမှ မောင်အောင်ဦးအား –
“ငါ့မြေးကတော့ကွယ် ကြောက်တတ်လိုက်တာ၊ ဒါနဲ့ အိပ်နေတဲ့လူဟာ မကြောက်တတ်ဘူးတဲ့ကွ၊ ငါ့မြေး မကြောက်ရအောင် သွားအိပ်ချေတော့”
ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ မောင်အောင်ဦးမှာ အဖိုးဖြစ်သူ၏ စကားအား သဘောကျသွားပြီး “ဟုတ်လောက်တယ် အဘ၊ ကျုပ် ပြန်အိပ်တာပဲ ကောင်းတယ်ဗျာ” ဟူ၍ ပြောဆိုပြီးနောက် ထိုင်ရာမှထကာ မကြောက်အောင် ဇွတ်အတင်း အိပ်တော့မည်ဟူ၍ တဲအတွင်းသို့ သွားရောက်ရန် ဟန်ပြင်လေတော့၏။ ထိုအခါတွင် အဖိုးဖြစ်သူမှ –
“အင်း … ငါ့မြေး အိပ်တဲ့ နေရာကလည်း အဘ ထိုင်နေတဲ့ နေရာနဲ့စာရင် အဲ့ဒီ ရန်အောင်တောင်နဲ့ ပိုနီးသွားမလားပဲ”
ဟူ၍ တစ်ယောက်တည်း ရေရွတ်သလိုလိုဖြင့် ကြောက်ရွံ့နေသည့် မြေးဖြစ်သူအား စနောက်လိုက်လေရာ တဲအတွင်းသို့ ဝင်ရန် ဟန်ပြင်နေသော မောင်အောင်ဦးမှာ ဝင်ရနိုးနိုး အဖိုးဖြစ်သူဆီပဲ ပြန်သွားရနိုးနိုးဖြင့် ခြေတုံချတုံ ဖြစ်သွားပြီးနောက် “ဟာဗျာ .. အဘကလည်း” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေတော့၏။
တစ်နေ့သ၌ ရွက်လှရွာလေး၏ အနောက်ဖက်ရှိ ကိုကြက်ကြီး ပိုင်ဆိုင်သော ထန်းတောအတွင်း လူရွယ်တစ်စုသည် ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ထန်းရည်သောက်လျှက် ရှိသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ၎င်းတို့သည် လူပျို ကာလသားများ ဖြစ်ကြသည့် အားလျော်စွာ မည်သည့် မိန်းကလေး လှကြောင်းပကြောင်း၊ မည်သူနှင့် မည်သူကတော့ဖြင့် သမီးရည်စား ဖြစ်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရွာအတွင်းမှ မည်သည့် အပျိုမလေးကတော့ဖြင့် ချစ်စရာ အလွန်ကောင်းကြောင်း၊ မိမိ ကြိုက်နေမိကြောင်း … စသည့် မိန်းမနှင့် ဆက်စပ်သော စကားများအား ထန်းရည်သောက်ရင်း ပြောဆိုလျက် ရှိကြလေ၏။
အချို့သော လူရွယ်များကမူ ရွာအတွင်းမှ မည်သူ၏ ကြက်ဖကြီးသည် အခွပ် အလွန်ကောင်းကြောင်း၊ တစ်ဖက်ရွာမှ မည်သူ၏ ကြက်နှင့် အစမ်း တိုက်ကြည့်ရာ တစ်ဖက်ရွာမှ ကြက်မှာ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကြက်ဖကြီးအား ချက်၍ ထန်းရည်နှင့် မြည်းလိုက်ရပါလျှင် သာ၍ပင် ကောင်းလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြလေ၏။
၎င်းတို့၏ ထန်းရည်ဝိုင်းသည် အတန်ငယ် ကြာလာသောအခါတွင် ထိုအထဲမှ လူရွယ်တစ်ယောက်မှ ကိုကြက်ကြီး၏ မိန်းမ မကြာခင် လာရောက်ချပေးသော ကြွက်ကြော်အား တစ်ချက်ဝါးလိုက်ပြီးနောက် စကား စလေ၏။
“ဟေ့ကောင်တို့ရေ … မင်းတို့ကို ကြုံတုန်းကြုံခိုက် ရန်အောင်တောင်ပေါ်က သရဲအကြောင်းကို ပြောရဦးမယ်ကွ”
ထိုအခါ ကျန်သည့် လူရွယ် လေးယောက်မှာ ရန်အောင်တောင် နှင့် သရဲ ဟူသော စကားများကြားလိုက်ရလျှင် လွန်စွာ စိတ်ဝင်စား သွားရကား ထိုစကား စသော လူရွယ်အား ကြည့်လိုက်ကြလေ၏။ ထိုအချင်းအရာအား ရိပ်မိသော လူရွယ်မှာ “အဟမ်း .. ဟမ်း … ဒီလိုကွ” ဟူ၍ ၎င်းပြောမည့် အကြောင်းအား ဆက်၍ မပြောသေးဘဲ ကြွက်ကြော်အား ကိုက်ဝါးနေပြန်လေ၏။ ထိုအခါ ကျန်လူရွယ်များမှ “ဘယ်လိုတုန်း ငါ့ကောင်ရဲ့၊ မြန်မြန်ပြောကွာ” ဟူ၍ ပြောကြလေတော့၏။
“ဒီလိုကွာ၊ ဟိုနေ့က ငါ့အဘနဲ့ တူတူ သွားအိပ်တယ်ကွ၊ မင်းတို့လည်း သိတယ် မဟုတ်လား၊ ငါ့အဘက အဲ့ဒီ ရန်အောင်တောင် နားမှာ တစ်ယောက်တည်း နေတာလေကွာ”
“မင်းကလည်းကွာ၊ အဲ့ဒါ သိနေတာပဲ၊ သရဲ ဘယ်လို ခြောက်တာတုန်း ဆိုတာသာ ပြော”
“အေးပါ၊ ပြောပါ့မယ်၊ အဲ့ဒီနေ့ ညသန်းခေါင်ကျော်ကျတော့ ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း မသိပါဘူးဗျာ၊ ငါလည်း မနိုးစဖူး တစ်ရေးနိုးလာတာကွ၊ ငါလည်း မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရော၊ လား .. လား .. တဲရှေ့က ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ကြီးကွာ”
ယင်းသို့ လူရွယ်မှ ပြောလိုက်သောအခါ ကျန်လူရွယ်များမှာ မျက်လုံးများ ပြူးသွားကြလေ၏။
“ဟေ … ဟုတ်လားကွ၊ တောင်ပေါ်က သရဲက မင်းတို့ တဲကို လာခြောက်တာပေါ့”
“ငါ ပြောမှာက အဲ့ဒီ ငုတ်တုတ်ကြီးကိုလည်း တွေ့လိုက်ရော၊ ငါလည်း ကြက်သီးတွေ ထသွားတာပေါ့ကွာ”
လူရွယ်၏ စကားကြောင့် ကျန်သူများမှာ လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားသွားကြဟန် ရှိကြပြီး လူရွယ် ပြောမည့် စကားများအား စောင့်ဆိုင်း နားထောင်လျှက် ရှိကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ထိုအခါ လူရွယ်မှ ဆက်ပြောပြန်လေသည်။
ထိုလူများ၏ အမေးကို လူရွယ်မှ အင်း မလုပ်၊ အဲ မလုပ်ဘဲ “ထန်းရည်ကလည်း ကုန်တော့မယ်ကွာ၊ သောက်ကလည်း ထပ်သောက်ချင်သေးတယ်၊ ပိုက်ဆံကလည်း ကုန်ပြီ” ဟူ၍ တစ်ယောက်တည်း ရေရွက်သည့်ဟန်ဖြင့် ပြောလေ၏။ ထိုအခါတွင် ကျန်လူများမှာ အထာပေါက်သွားပြီး လူရွယ်အား မကျေမနပ် တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် –
“ခွီးထဲမှဘဲ မင်းကလည်း ဇာတ်လမ်းကို မဆက်သေးဘဲနဲ့ ထန်းရည် ကုန်တော့မယ်ပဲ ပြောနေတယ်၊ အေးပါ၊ ထားပါတော့” ဟူ၍ ပြောဆိုလိုက်ပြီး တဲအတွင်းမှ ထန်းသမား ကိုကြက်ကြီးအား “ဗျို့ … ကိုကြက်ကြီး ထန်းရည် တစ်မြူလောက် ထပ်ချပါဦးဗျို့” ဟူ၍ အော်ဟစ် လိုက်လေတော့၏။ လူရွယ်မှာ ကိုကြက်ကြီး လာ၍ ချပေးသော ထန်းရည်အိုးတွင်းမှ ထန်းရည်အား ၎င်း၏ ခွက်အတွင်း ငှဲ့လိုက်ပြီးနောက် တစ်ကြိုက် မော့လိုက်လေ၏။
“အားပါးပါး … ကောင်းလိုက်တဲ့ ထန်းရည်၊ သူများ တိုက်လို့လားတော့ မသိဘူး၊ ကောင်းချက်ကတော့ လွန်လွန်းတယ်”
“ဟေ့ကောင် လျှာမရှည်နဲ့တော့၊ မင်းဇာတ်လမ်းကို ထပ်ပြော”
“အေးပါကွာ၊ မင်းတို့ကလည်း ဇွတ်ပဲ၊ အဲ .. ဒါနဲ့ ငါပြောတာ ဘယ်နား ရောက်သွားပြီတုန်း”
“မင်းက သရဲကို ဓာတ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးလိုက်တယ်ကွာ၊ အဲ့ဒီနား ရောက်သွားပြီ”
“အော် … အေး၊ ငါလည်း အဲဒီလို ဓာတ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးလိုက်ရော၊ လား … လား …၊ သူက ဆေးလိပ်ကြီးတောင် ဖွာပြလိုက်သေးတယ်ကွ”
ကျန်လူများအား လူရွယ်၏ စကားအား စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြလေ၏။ ၎င်းတို့မှာ ရန်အောင်တောင်မှ အခြောက်အလှန့် ဇာတ်လမ်းများအား ကြားဖူးကြသော်လည်း ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့တော့ မရှိခဲ့ပေ။ ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ ကိုယ်တွေ့ ဇာတ်လမ်းအား စိတ်ဝင်တစား နားထောင် နေကြခြင်း ဖြစ်လေ၏။
“အဲဒီတော့ ဘယ်လို ထပ်ဖြစ်သေးတုန်း”
“အဲ့ဒီလိုကွာ၊ ဓာတ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးလိုက်တဲ့ ငါ့ကို ကြည့်ပြီး ဆေးလိပ်မီးနဲ့ ဖွာပြတာလည်း တွေ့ရော၊ မင်းတို့ သူငယ်ချင်းပဲ၊ ဘယ်ရမတုန်းကွ၊ တဲ ထဲက ထွက်ပြီး ကွပ်ပျစ်ဆီ လျှောက်သွားတာပေါ့”
“ဟ … ဟ၊ ဟေ့ကောင် ဒါတော့ လွန်ပြီ ထင်တယ်ကွာ၊ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် မင်းက ငကြောက်မှန်း ငါတို့ သိပြီးသား၊ အဲ့ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟေ့ကောင်၊ လာ မဖြီးနဲ့”
ဟူ၍ အခြားသူများမှ လူရွယ်အား ပြောကြလေရာ လူရွယ်မှာ သူ၏ သွားကြီးအား ဖြီးပြလိုက်ပြီးနောက် –
“အဟဲ … မင်းတို့ကလည်း၊ ငါ တကယ် သွားခဲ့တာကွ၊ ဘာလို့ဆိုတော့လေ၊ အဲဒီ ဆေးလိပ်ကို ဖွာပြတာ ငါ့အဘ ဖြစ်နေလို့ပဲကွ၊ အဟဲ၊ ငါ တစ်ရေးနိုးတော့ အဘကို မတွေ့ရဘူးလေကွာ၊ ဒါနဲ့ ငါလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ အဘများ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး ဓာတ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးကြည့်တော့ အဲ့ဒီ ငုတ်တုတ်ကြီးက အဘ ဖြစ်နေတာကွ၊ အဟဲ .. အဟီး”
ဟူ၍ စပ်ဖြီးဖြီး အမူအယာဖြင့် ပြောလိုက်လေတော့၏။ ယင်း လူရွယ်မှာ မောင်အောင်ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ စာဖတ်သူတို့ သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မောင်အောင်ဦးမှ ၎င်း၏ အဘဖြစ်သူနှင့် သွားရောက်အိပ်စက်သည့် နေ့က ကြားခဲ့ရသော တောင်ပေါ်မှ တယောသံ အကြောင်းကို ပြန်လည် ပြောပြနေခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ယင်းနောက်တွင် မောင်အောင်ဦးမှာ သူ၏ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသော ဖိုးလေး၊ ငအောင်၊ ရဲကြီးနှင့် မိုးကို တို့အား ၎င်း ကြားခဲ့ရသော တောင်ပေါ်မှ တယောသံ အကြောင်းကို ပြောပြလေ၏။ ထိုအခါ ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းများမှ တယောသံ ဖြစ်သည့်အတွက် ဥစ္စာစောင့် မိန်းမ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဥစ္စာစောင့် ယောက်ျားသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်မြင်ချက် ပေးကြလေ၏။
ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့ လူရွယ်တစ်စုသည် လူရွယ်ပီပီ စူးစမ်းလိုကြသည့်အလျောက် ကြောက်ပင် ကြောက်လင့်ကစား အဘိုးကြီး ဦးသာအောင်၏ စကားအရ ညစဉ် သန်းခေါင်ယံတွင် ပေါ်ထွက်တတ်သည့် တယောထိုးသည့် ဥစ္စာစောင့်ကို သွားရောက် ချောင်းမြောင်း ကြည့်ရှုလိုသည့် အားလျော်စွာ အချင်းချင်း ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်ကြလေတော့၏။
၎င်းတို့မှာ ငါးယောက်အဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အတွက် ကြောက်စရာ မလိုကြောင်း၊ အဆိုပါ တယောထိုးသည့် ဥစ္စာစောင့်အား တွေ့ရပါက ရွာထဲတွင် လှည့်ပတ်၍ ကြွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခန့်မသင့်၍ တစ်ခုခု ဖြစ်ပါကလည်း ထိုတောင်အနီးတွင် အဘဖြစ်သူ ဦးသာအောင်၏ တဲကလေး ရှိနေသဖြင့် ထိုတဲဆီသို့ ထွက်ပြေး၍ ရနိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ စွန့်စားခန်းအတွက် အသေးစိတ် အချက်များကို ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်နေကြလေတော့၏။
တစ်နေ့တစ်၌ ရွက်လှရွာသို့ သွားရာ တောလမ်းကလေးအတိုင်း လူတစ်စုသည် လျောက်လှမ်းလာသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ၎င်းတို့သည် နွမ်းလျနေပြီဖြစ်သော အဖြူရောင် အဝတ်များကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ ဦးခေါင်းကိုလည်း အဖြူရောင် အဝတ်များအား ခေါင်းပေါင်းသဖွယ် ပြုလုပ်ကာ ဝတ်ဆင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် အိတ်ကြီးနှစ်လုံးအား တောင်းသဖွယ်ပြုကာ တံပိုးဖြင့် လျှို၍ ထမ်းထားကြသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
၎င်းလူစုသည် ရန်အောင်တောင်နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရှိသော လမ်းနံဘေး ဇရပ်လေးသို့ ရောက်သောအခါ ဇရပ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်၍ အပန်းဖြေနေကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ၎င်းတို့မှာ တောအရပ်ဒေသများတွင် တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက်ဖြင့် လှည့်လှည် တောင်းရမ်းလေ့ ရှိကြသော သူတောင်းစားများပင် ဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါ သူတောင်းစားအုပ်စုတွင် ယောက်ျားကြီး သုံးယောက်နှင့် မိန်းမ နှစ်ယောက် တို့ ပါရှိလေ၏။
“ဖိုးကျော်ရေ …၊ ဟော .. ဟိုက မြင်နေရတာ ဒီအနီးအနား တစ်ဝိုက်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ရန်အောင်တောင် ဆိုတာပေါ့၊ တောင်ပေါ်က ထုံးဖြူဖြူစေတီလေးကတော့ဖြင့် ရန်အောင်စေတီပေါ့ကွာ”
ယင်းသို့ သူတောင်းစား အုပ်စုထဲတွင် အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်ဟန်ရှိသော သူတောင်းစားကြီး တစ်ဦးမှ ပြောလိုက်သော အခါတွင် ဖိုးကျော် ဆိုသူ အသက် (၃၀) အရွယ် သူတောင်းစား မှာ ရန်အောင်တောင်ဆီသို့ လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်လေ၏။
“ရန်အောင်တောင် ဆိုတာ ဒီတောင်ကိုးဗျ ….။ ကိုခင်ရေ …. ရန်အောင်စေတီလေးကတော့ဖြင့် ထုံးဖြူဖြူ စေတီလေး ဆိုပေမယ့် သပ္ပါယ်သားဗျ”
“သပ္ပါယ်တာပေါ့ ဖိုးကျော်ရယ်၊ ဒါ့ထက် ကျုပ်တို့ ဒီဇရပ်မှာပဲ စခန်းချပြီး ရွက်လှရွာကို ဝင်ကြတာပေါ့”
“ဟုတ်ပါပြီလေ၊ ကိုခင် သဘောပါပဲ”
ထိုသို့ဖြင့် အဆိုပါ သူတောင်းစား အုပ်စုသည် ရန်အောင်တောင်နှင့် မနီးမဝေး ခရီးလမ်းနံဘေးတွင် ခရီးသွားများ အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ဇရပ်ကလေးပေါ်တွင် နေထိုင်ရင်းဖြင့် နေ့ခင်း အချိန်များတွင် ရွက်လှရွာကလေး ဆီသို့ သွားရောက်ကာ တောင်းရမ်းခြင်းကို ပြုကြလေ၏။
အဆိုပါ သူတောင်းစားအုပ်စု ရောက်ရှိပြီး နှစ်ရက်ခန့်အကြာ ညခင်းတစ်ခုတွင် အောင်ကို ဟူသော သူတောင်းစား ဖြစ်သူမှ ဤသို့ စကားစလေ၏။
“ဒီက ကိုခင်တို့၊ ဖိုးကျော်တို့၊ ခင်မြတို့၊ တင်စိန်တို့ကို ကျုပ်တစ်ခုလောက်တော့ ပြောရဦးမယ်ဗျ”
“ပြောပါဗျာ ….၊ ပြောပါ”
“ဒီလိုဗျ ….။ ကျုပ်တို့ ဒီဇရပ်လေးမှာ နေကြတာ နှစ်ရက်ရှိသွားပြီ မဟုတ်လား၊ ဒီနေ့ရောဆို သုံးရက်ပေါ့ဗျာ။”
“အင်း ….၊ ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါ့ထက် ဘာဖြစ်လို့လဲ အောင်ကိုရဲ့”
“ဒီလိုဗျ …..၊ ကျုပ်တို့ စရောက်တဲ့ ညကရော၊ မနေ့ညကပါ ကျုပ် တယောသံ ကြားမိသလားလို့၊ ဟို .. ကိုခင်ပြောတဲ့ ရန်အောင်တောင်ပေါ်က လာတဲ့ တယောသံလို့ ကျုပ်တော့ ထင်မိတယ်ဗျ”
ယင်းသို့ ပြောလိုက်သောအခါ ကိုခင် ဆိုသူမှ အတန်ငယ် ပြုံးလိုက်သည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ကျန်သုံးယောက်ကမူ အောင်ကို၏ စကားအား ထောက်ခံနေကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့လည်း ညဘက် အချိန်များတွင် တောင်ပေါ်မှ တယောသံအား ကြားမိကြခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်လေ၏။
“ကိုခင်က ဘာလို့ ပြုံးတာတုံးဗျ။ ကျုပ်ပြောတာ မယုံလို့လား”
“မဟုတ်ရပါဘူး အောင်ကိုရယ်၊ ကျုပ်တွေးထားတာနဲ့ မောင်ရင် ပြောတာနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်သွားလို့ ကျုပ်က ပြုံးမိတာပါ”
“ဒါဆို ကိုခင်လည်း တယောသံ ကြားရတယ်ပေါ့”
“ဟုတ်တယ် အောင်ကို၊ ကျုပ်လည်း ဒီတယောသံကို နှစ်ရက်ဆက် ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ညရောပါ ထပ်ကြားရလို့ကတော့ဖြင့် ကျုပ် တွေးထားတာက ရန်အောင်တောင်ပေါ်တက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက် စုံစမ်းကြဖို့ပဲ။ ဒီတော့ကာ အကယ်၍များ ဒီနေ့ညပါ တယောသံ ထပ်ကြားရရင် နက်ဖြန်ခါ ညဘက်မှာ ကျုပ်နဲ့ ဖိုးကျော်က တောင်ပေါ်ကို သွားပြီး တယောသံပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းမယ်။ အောင်ကို ကတော့ ခင်မြနဲ့ တင်စိန် အဖော်ရအောင် နေခဲ့ရမယ်”
ယင်းသို့ ကိုခင် ဆိုသူမှ ပြောလိုက်သောအခါတွင် ကျန်လူများမှာ အမိန့်ကို နာခံကြသည့် အသွင်ဖြင့် ခေါင်းညိမ့် လိုက်ကြသည်ကို တွေ့ရလေတော့၏။
တစ်နေ့သ၌ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်ခန့်တွင် လူတစ်စုသည် တယောသံ ထွက်ပေါ်လာတတ်သည်ဟု နာမည်ကြီးနေသော ရန်အောင်တောင် ရှိရာဆီသို့ ဦးတည် လျောက်လှမ်းလာကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ အဆိုပါ လူစုမှာ ငါးယောက်ပါသော လူစု ဖြစ်ကြောင်းကို လမိုက်ည ဖြစ်သော်လည်း ကြယ်ရောင်တို့၏ လင်းအားဖြင့် မြင်တွေ့နေရပေ၏။ ၎င်းတို့သည် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးတစ်လက်အား အသုံးပြုကာ လျောက်လှမ်း လာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေ၏။
ရာသီအားဖြင့် နွေရာသီ ဖြစ်သည့်အတွက် ယာခင်းများမှာ သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထားခြင်း မရှိပေ။ ယင်းကြောင့် အဆိုပါ ယာခင်းများမှာ သဲတော ဟင်းလင်းပြင်ကြီးသာ ဖြစ်၍ နေပေ၏။ ထိုလူငါးယောက်မှာ ယာခင်း သဲတောများကို ဖြတ်လျက် ရန်အောင်တောင် ဆီသို့ ဦးတည် လျောက်လှမ်းလာနေခြင်းပင် ဖြစ်ပေ၏။
“ဟေ့ကောင်တို့ရေ … ငါဖြင့် လာသာ လာရတာ၊ ခပ်လန့်လန့်ပဲဟ”
“ဟေ့ကောင် ဖိုးလေး၊ မင်း လန့်နေရင်လည်း ငါတို့နဲ့ ဆက်မလိုက်နဲ့ကွာ၊ တစ်ယောက်တည်း ဒီကနေ လှည့်ပြန်တော့”
“အေး … တစ်ယောက်တည်း မပြန်ရဲရင်လည်း ဘာမှ လန့်မနေနဲ့၊ ဒါပဲ”
၎င်းတို့ လူစုမှာ ရွက်လှရွာမှ လူရွယ်များ ဖြစ်ကြသည့် အောင်ဦး၊ ဖိုးလေး၊ ငအောင်၊ ရဲကြီးနှင့် မိုးကို တို့ပင် ဖြစ်ကြလေ၏။ ၎င်းတို့သည် ကြိုတင် ကြံစည်ထားသည့်အတိုင်း ရန်အောင်တော်ပေါ်မှ ညစဉ် သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာတတ်သည့် တယောသံ ပိုင်ရှင်အား စူးစမ်းရန် လာရောက်နေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့ လူစုသည် အစ ပထမ ရွာမှ ထွက်လာစတွင် စကား တပြောပြောနှင့် လျောက်လှမ်းလာခဲ့ကြသော်လည်း ရန်အောင်တောင်နှင့် နီးကပ်လာသောအခါတွင် ၎င်းတို့ စကားများသည် တိုးလျ လာသကဲ့သို့ အတန်ငယ်လည်း တိတ်ဆိတ်နေပေ၏။ ၎င်းတို့သည် ရန်အောင်တောင်ခြေဆီသို့ ရောက်လာသောအခါတွင် တောင်ပေါ်ဆီသို့ ချက်ချင်း တက်ရောက်ခြင်း မပြုသေးဘဲ တောင်ခြေတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဝိုင်းဖွဲ့၍ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တီးတိုးပြောဆိုကာ ထိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
“ဟေ့ကောင် ရဲကြီး၊ တယောသံ ကြားရတာနဲ့ မင်းက ရှေ့ဆုံးက တက်ရမှာနော်”
“အေးပါဟ၊ ငါ သိပါတယ်”
“သိရင်လည်း ပြီးရော၊ ငအောင် က ရဲကြီးနောက်ကနော်”
“မင်းကလည်း စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း သိပြီးသားကို လျောက်ပြောနေသေးတယ်၊ မင်း ကြောက်နေလည်း အေးအေးဆေးဆေး နေပါကွာ၊ အဲ … ဒါနဲ့ ပိတ်ဆုံးက လိုက်တဲ့ကောင်နောက်နေ ဘွားခနဲ ပေါ်လာလို့ကတော့ .. အဟိ .. ခွိခွိ”
“ဟေ့ကောင် ရဲကြီး ပေါက်ကရ လျောက်မပြောနဲ့ကွာ၊ မင်း ပြောတာနဲ့ ကြောချမ်းချင်သလိုတောင် ဖြစ်လာပြီ”
၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်အရ တောင်ပေါ်မှ တယောသံ ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် တောင်ပေါ်သို့ တိတ်တဆိတ် တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်လေသည်။ ယင်းသို့ တက်ရောက်သည့်အခါတွင် ရဲကြီးမှ ရှေ့ဆုံးမှ သွားရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက်မှ ငအောင်၊ မိုးကို၊ အောင်ဦး၊ ဖိုးလေး တို့မှ အစဉ်အတိုင်း လိုက်ကြရန် ဖြစ်လေသည်။
တောင်ပေါ်မှ တယောသံ ပိုင်ရှင်မှာ ယောက်ျားပင် ဖြစ်စေ၊ မိန်းမပင် ဖြစ်စေ ၎င်းတို့အား တွေ့ရှိသွားပြီး ရန်မူလာပါက အသင့် ယူဆောင်လာကြသော လက်ကောက်ဝတ်ခန့် တုတ်များဖြင့် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ကြမည် ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍ အခြေမလှပါမူ အောင်ဦး၏ အဖိုးဖြစ်သူ ဦးသာအောင် နေထိုင်သော တဲဆီသို့ ပြေးကြမည် ဖြစ်လေ၏။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ် ဖြစ်လေသည်။
“ဟေ့ကောင်တွေ ဟိုမှာ .. ဟိုမှာ … ကြည့်စမ်းပါဦး”
မိုးကို ဆိုသူ လူရွယ်မှ တစ်နေရာအား လက်ညိုးညွှန်၍ ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ညွှန်ပြသည့် နေရာဆီသို့ အခြားသော လူရွယ်များမှာ လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်ကြလေ၏။ မိုးကို ညွှန်ပြသည့် အရာမှာ ကြယ်ရောင် အလင်းအောက်တွင် မည်းမည်း သဏ္ဍာန်နှစ်ခုသည် ရွှေ့လျားနေခြင်းပင် ဖြစ်လေ၏။ အဆိုပါ မည်းမည်း သဏ္ဍာန် နှစ်ခုဆီမှ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လင်းခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်သေး၏။
“ဟာ .. တောင်ပေါ်တက်ပြီး တယောထိုးမယ့် သရဲတွေလား မသိဘူးကွ၊ ငါတို့ ပြေးကြရအောင်ကွာ”
“အရေးကြီး ဒီငကြောက်ကလည်း တစ်မျိုးပဲ၊ အဲဒါ သရဲတွေ မဟုတ်လောက်ဘူးဟ၊ သူတို့ဆီက တစ်ချက်တစ်ချက် လင်းလာတာ ဓါတ်မီးအရောင်ပဲ ဖြစ်ရမယ်ကွ”
“ငအောင် ပြောတာ ဟုတ်လောက်တယ်၊ ဓါတ်မီး ကိုင်ထားပုံထောက်တော့ လူတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ငါတို့ ရွာက ကိုကြီးငတက်တို့များလား မသိဘူး”
“အာ .. ကိုကြီးငတက်က ဒီအချိန်ဆို ထန်းရည် မူးပြီး အိပ်နေလောက်ပြီ၊ ငါ သူ့ကို ညနေက တွေ့တုန်းကတောင် တော်တော် မူးနေပြီဟ”
“ဒါဖြင့် ဘယ်သူတွေ ဖြစ်ကြမတုန်းကွ”
“ဒါတော့ ငါတို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ၊ ငါတို့ ဟိုနားကို သွားပုန်းနေရအောင်၊ ဓါတ်မီးတော့ မထိုးကြနဲ့နော့”
ယင်းသို့ဖြင့် ၎င်းတို့ လူရွယ်တစ်စုသည် တောင်ခြေနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ရှိနေသော ထန်းပင်များနောက်သို့ သွားရောက် ပုန်းအောင်ကာ အဆိုပါ မည်းမည်းသဏ္ဍာန် နှစ်ခုအား စောင့်ကြည့်နေကြလေ၏။ ထို မည်းမည်းသဏ္ဍာန် နှစ်ခုသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် နီးသထက် နီးလာသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ သဏ္ဍာန်မှာ ပို၍ ပီပြင်လာလေ၏။ လူရွယ်တစ်စု စောင့်ကြည့်နေသည့် နေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့်အခါတွင် အဆိုပါ မည်းမည်းသဏ္ဍာန် နှစ်ခုမှာ လူနှစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိခွင့် ရလိုက်လေ၏။
“ငါတို့ ထင်တဲ့အတိုင်း လူတွေပဲကွ၊ ငါတို့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမတုန်း”
“ဒါမှ ဂွကျတာပဲကွာ၊ ဒီလူတွေက ဒီအချိန်ကြီးမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာ တောင်ခြေကို ဘာလာလုပ်ကြသလဲ မသိပါဘူး”
“ဟေ့ကောင် … ဟေ့ကောင် .. တောင်ခြေကို မဟုတ်ဘူး .. ဟိုမှာ တောင်ပေါ်ကို တက်သွားကြပြီတွေ့လား”
“ငါ ထင်တဲ့အတိုင်း တယောထိုးမယ့် သရဲတွေလည်း မသိဘူးနော်”
“အာ … ဖိုးလေးကလည်း၊ မင်းကလည်း တစ်ဆိတ်ရှိ သရဲဆိုတာကြီးပဲ၊ မင်း မမြင်ဘူးလား၊ လူတွေမှန်း သိရက်နဲ့”
“သရဲတွေကလည်း လူလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ကွ၊ ငါတို့က အခု လူရုပ်ပုံစံပဲ မြင်ရတာကို၊ အနီးကပ် မြင်ရတာမှ မဟုတ်တာ၊ တော်ကြာနေ သူတို့မှာ အစွယ်တွေ ဘာတွေ ပါနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ”
“မင်း ပါစပ် ပိတ်ထားပါဦး ဖိုးလေးရာ၊ အခု ငါတို့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမတုန်း”
“ဒီလို လုပ်ရအောင်ကွာ၊ ငါတို့ အဲဒီလူနှစ်ယောက်ကို မလိုက်တော့ဘူး၊ အစီအစဉ်အတိုင်းပဲ တယောသံကြားရင် အပေါ်ကို တက်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် သတိတော့ ထားသွားရမယ်ကွ၊ စောစောက နှစ်ယောက်က ဘာမှန်း ညာမှန်း သိတာ မဟုတ်ဘူး”
“အေး .. ဒါပဲ ကောင်းတယ်၊ တယောသံ ကြားအောင် ဒီနေရာကပဲ ငါတို့တွေ ထပ်စောင့်ကြရအောင်ကွာ”
ငါးယောက်ပါသော လူရွယ်အုပ်စုသည် ရန်အောင်တောင်ပေါ်ဆီမှ ညသန်းခေါင်းယံ အချိန်များတွင် ပေါ်ထွက်လာတတ်သည့် တယောသံအား စောင့်မျှော်နေရင်းဖြင့် အချိန်အားဖြင့် နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် တစ်ယောက်သော လူရွယ်မှ စကားစလေ၏။
“ဟေ့ကောင်တို့ရေ .. ခြင်တွေကလည်း ဆော်သဟ၊ တောင်ပေါ်က တယောသံကလည်း စောင့်ပါမှ ထွက်ကို မလာသေးဘူး”
“စိတ် ရှည်ရှည်ထားစမ်းပါ ငအောင်ရာ၊ အချိန်တန် ထွက်လာမှာပေါ့”
“စောင့်တော့ စောင့်နေတာပဲဟ၊ ဒါနဲ့ ဟို မည်းမည်းနှစ်ယောက်လည်း ပြန်ဆင်းလာတာ မတွေ့ရသေးဘူးနော့”
ထိုသို့ ငအောင် ဆိုသူ လူရွယ်မှ ပြောလိုက်သော အခါတွင် ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်မှ ပြန်လည်၍ ပြောလေ၏။
“ငါလည်း အဲဒါပဲ စဉ်းစားနေတာကွ၊ အဲဒီ မည်းမည်းနှစ်ယောက်က ဘာတွေတုံး။ ဟိုငကြောက် ဖိုးလေးပြောသလို တယောထိုးမယ့် သရဲတွေဆိုလည်း တယောသံက ကြားလာရမှာပေါ့ကွ။ အခုဟာက ဘယ်လို တွေးရမှန်းကို မသိဘူး”
“ငါအထင်တော့ တောင်ပေါ်မှာ နေတဲ့ သရဲတွေများလား မသိဘူး။ ငါတို့ကို မြင်လို့ အယောင်ပြပြီး ခြောက်တာနေမှာ”
ယင်းသို့ ဖိုးလေး ဆိုသူ လူရွယ်မှ ပြောလေရာ …
“ဟေ့ကောင် ဖိုးလေး၊ မင်းကလည်း မည်းမည်းမြင်ရင် သရဲကြီး ပြောနေတော့တာပဲ။ မင်း မလိုက်လာရင် တော်တော်ကောင်းမှာ”
“ဟေ့ကောင် အောင်ဦး၊ ငါက သရဲထင်လို့ သရဲလို့ပြောတာ ဘာဖြစ်တုန်းကွာ”
“အေး .. ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဖိုးလေး၊ မင်းကို ကြောက်တတ်လွန်းလို့ ပြောနေတာ”
ထိုအခါ ရဲကြီးဆိုသူမှ ပြောလေ၏။
“တော်ပါတော့ကွာ။ ဖိုးလေးပြောတာ ဂရုစိုက်မနေနဲ့၊ ငါတို့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြဦးမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ပြောကြရအောင်၊ အခုဟာက ငါတို့ အစီအစဉ်တွေကိုတောင် ပြောင်းရတော့မလို ဖြစ်နေပြီ”
“အစီအစဉ်တော့ ပြောင်းလို့ မဖြစ်ဘူးကွ၊ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ပြောင်းရမယ်ထင်တယ်”
“လုပ်စမ်းပါဦး မိုးကို ရာ .. ဘယ်လို နည်းနည်း ပြောင်းရမှာတုံး”
“ဒီလိုကွာ၊ ငါတို့ ထပ်စောင့် မနေနိုင်တော့ဘူး၊ ခြင်တွေလည်း တော်တော်ကိုက်လာပြီ၊ ငါတို့ အကြောင်းသိရအောင် တောင်ပေါ် တက်ကြည့်ကြရအောင်ကွာ”
ယင်းသို့ မိုးကို ဆိုသူ လူရွယ်မှ အကြံပြုလိုက်သော အခါ အခြားသော လူရွယ် လေးယောက်မှာ အတန်ငယ် စဉ်းစားကြပြီးနောက် မိုးကို၏ အကြံကို လက်ခံ အတည်ပြုလိုက်ကြလေ၏။ ၎င်းနောက် လူရွယ်အုပ်စုသည် လက်နက်များ အဖြစ် အသုံးပြုရန် ယူဆောင်လာသော သစ်သားချောင်းများအား ကိုင်စွဲလျက် တောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ရန် ခြေလှမ်း ပြင်လိုက်ကြလေတော့၏။
ညသည် လမိုက်ည ဖြစ်သည့်အတွက် လ မသာပေ။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးလည်း မှောင်မဲနေလေ၏။ သို့ရာတွင် ကြယ်ရောင်တို့ကြောင့် အတန်ငယ်တော့ လင်းလက်နေသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ အချိန်သည်လည်း သန်းခေါင်းယံ အချိန်ကို ကျော်လွန်လာခဲ့လေပြီ ဖြစ်၏။ ထိုအချိန် ထိုကာလမျိုးတွင် ဥစ္စာစောင့်များ ရှိသည်ဟူ၍ နာမည်ကြီးသော ရန်အောင်တောင်ဆီသို့ လာရောက်ရန်မှာ လူတစ်ရာတွင် တစ်ယောက်ပင် လုပ်ဆောင်မည့် အလုပ်ဟူ၍ မထင်မိပါပေ။ သိုရာတွင်မူ ရွက်လှရွာမှ လူရွယ်တစ်စုမှာမူ ယခုကဲ့သို့သော အချိန်အခါမျိုးတွင် တောင်ဆီသို့ လာရောက်ခြင်းထက် တောင်ပေါ်သို့ပင် တက်ရောက်နေကြပြီ ဖြစ်လေ၏။
၎င်းလူရွယ်တစ်စုသည် ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ထောင်လိုက် ပုံစံမျိုးဖြင့် တောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်နေကြလေ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်ယောက်နောက်မှ တစ်ယောက် တက်ရောက်ကြခြင်းပင် ဖြစ်ပါ၏။ အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ရဲကြီးဆိုသူ လူရွယ်မှာ ရှေ့မှ ဦးဆောင်၍ တက်ရောက်နေ၏။ ၎င်း၏ လက်ထဲတွင် သစ်သားချောင်းအား ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားသကဲ့သို့ မှောင်မိုက်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အားလည်း သတိထား ကြည့်ရှုကာဖြင့် တောင်ပေါ်ဆီသို့ တက်ရောက်နေလေသည်။
ယင်းသို့ တက်ရောက်လာကြရာတွင် တောင်ပေါ်ဆီသို့ ရောက်လုနီးအချိန်တွင် ရဲကြီးဆိုသူမှာ ရှေ့သို့ ဆက်လက် တက်ရောက်ခြင်း မပြုသေးဘဲ ရပ်လိုက်လေ၏။ ၎င်း၏ နောက်မှ လူရွယ်များကိုလည်း ငြိမ်နေကြရန် ဟန်အမူအယာပြ၍ သတိပေးလိုက်သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ယင်းသို့သော သတိထား၍ သွားလာရသည့် အချိန်မျိုးတွင် စကားပြောခြင်း မပြုကြရန်၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အသံမထွက်စေရန် တောင်အောက် ကတည်းကပင် ကြိုတင် တိုင်ပင်ထားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်မှ ဟန်အမူအယာဖြင့် သတိပေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်လေ၏။
ရဲကြီးဆိုသူ လူရွယ်မှာ ၎င်းနောက်မှ လူရွယ်များအား ထပ်မံ၍ လက်နှစ်ချောင်း ထောင်ပြကာ ရှေ့ဆီသို့လည်း လက်ညိုးညွှန်ပြလိုက်လေသည်။ နောက်ဆုံးမှ လိုက်ပါလာရသူ ဖိုးလေး ဆိုသူ လူရွယ်မှာ ရဲကြီးပြသည့် ဟန်အမူအယာများအား ရှင်းလင်းစွာ မမြင်ရပေ။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏ ရှေ့မှ လူရွယ်မှ ပြန်လည် ပြသလိုက်ခြင်းကြောင့် ကောင်းစွာ သိရှိသွားရလေ၏။
ထိုသို့ဖြင့် ၎င်းတို့သည် ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်၏ အရိပ်အယောင်အား ကြည့်၍ စောင့်ဆိုင်းနေကြစဉ်တွင် …
ဟူသော အော်သံကြီးသည် ညသန်းခေါင်းယံ အချိန်ကို ထွင်းဖောက်၍ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်ကို ကြားလိုက်ရလေ၏။
“ဟေ့ … ဘယ်သူလဲကွ၊ သေချင်လို့လား …”
အဆိုပါ အသံမှာ တောင်ပေါ်ရှိ ရန်အောင်တောင် နံဘေးမှ အသံဖြစ်လေ၏။ ယင်းသို့ တောင်ပေါ်ဆီမှ အသံပေး၍ စိန်ခေါ်လိုက်သော်လည်း လူရွယ်အုပ်စုမှာ တုပ်တုပ်မျှပင် မလှုပ်ကြပေ။ ထိုအခါ တောင်ပေါ်ဆီမှ နေ၍ လူရွယ်အုပ်စု ရှိရာဆီသို့ လှမ်းလျောက်၍ လာသည့် အသံများကို ကြားလိုက်ရလေသည်။
အဆိုပါ ခြေသံမှာ ၎င်းတို့နှင့် အတန်ငယ် နီးကပ်လာသော အခါတွင် ရဲကြီး ဆိုသူမှာ မတ်တပ်ထ၍ ရပ်လိုက်လေ၏။ ၎င်းနောက်မှ လူရွယ်များမှာလည်း ရဲကြီး ကဲ့သို့ပင် ရပ်လိုက်ကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ထံ လျောက်လှမ်းလာသော ခြေသံပိုင်ရှင်ဆီသို့ လျောက်လှမ်းသွားကြလေ၏။
“ကျုပ်တို့ ရွက်လှ ရွာသားတွေပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကရော ဘာတွေလဲ”
ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်မှ ၎င်းတို့နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရှိနေသော မျက်နှာများအား ပဝါစများဖြင့် စည်းနှောင်ထားသည့် လူနှစ်ယောက်အား ပြောလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်လေ၏။ ထိုအခါ မျက်နှာအား ပဝါစည်းထားသည့် လူတစ်ဦးမှ ရီကျဲကျဲ လေသံဖြင့် ပြန်လည် ပြောဆိုလေ၏။
“ဟ .. တယ်လာတဲ့ လူငယ်ပါလားဟေ့။ ငါတို့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။ မင်းတို့က အချိန်မတော် ဘာကြောင့် ဒီတောင်ပေါ်ကို ရောက်လာတာလဲ။ သရဲ မကြောက်ဘူးလား”
“ကျုပ်က သရဲကို လူဆိုးလူညစ်လောက် မကြောက်တတ်ဘူးဗျ”
“ဟုတ်ပါသကော ကိုခင်ရေ။ ဒီသတ္တိခဲလေးတွေကို နည်းနည်းလေး ကြောက်တတ်သွားအောင် သင်ပေးရရင် မကောင်းဘူးလားဗျ”
“အင်း .. ငါလည်း ဒါကိုပဲ စဉ်းစားနေတာ … ငါတို့တော့ တယောထိုးတဲ့ သရဲကို မဖမ်းနိုင်သေးတဲ့ အတူတူ ဒီကောင်လေးတွေကိုပဲ ဖမ်းလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူး”
ထိုအခါ ရဲကြီးဆိုသူ လူရွယ်မှာ ၎င်း၏ လက်အတွင်းမှ သစ်သားချောင်းအား ကိုင်ဆုပ်၍ ပြသရင်း …
“ဟေ့လူတွေ ခင်ဗျားတို့ ဒါကို ဘာမှတ်နေတုန်း”
ဟူ၍ အသံအား အနည်းငယ်မြှင့်ကာ ပြောလိုက်လေ၏။
“အဲဒါ သစ်သားချောင်းကြီးလေကွာ၊ ငါတို့မှာ မင်းတို့ လက်ထဲက သစ်သားချောင်းတွေထက် ကောင်းတဲ့ဟာ ပါသကွ၊ ဟောဒီမှာ လေကွာ”
ဟူ၍ ဖိုးကျော် ဆိုသူမှာ ၎င်း၏ ခါးကြားတွင် ထိုးထားသည့် သေနတ်အား ထုတ်ယူကာ ပွတ်သပ်၍ ပြောလိုက်လေ၏။ လူရွယ်တစ်စုမှာ အဆိုပါ သေနတ်အား မြင်လိုက်ရသော အခါတွင် တန့်သွားကြလေတော့၏။
ယင်းသို့ ဖိုးကျော် ဆိုသူ မျက်နှာအား ပဝါစ စည်းနှောင်ထားသူမှ ၎င်း၏ ခါးကြားအတွင်းမှ သေနတ်အား ထုတ်ယူကာ လူရွယ်တစ်စုအား ခြိမ်းခြောက်စကား ပြောကြားလိုက်စဉ်တွင် ၎င်း၏ ကျောဘက်မှ အသံတစ်သံသည် ထွက်ပေါ်လာလေတော့၏။ ထိုအသံမှာ လူရွယ်တစ်စုနှင့် မျက်နှာပဝါစ စည်းနှောင်ထားသူ လူနှစ်ဦးတို့၏ လာရင်းကိစ္စဖြစ်သော တယောသံ ပင် ဖြစ်လေတော့၏။
အဆိုပါ တယောသံမှာ လွမ်းဆွေးဖွယ် ကောင်းလှ၏။ ဂီတနှင့် မယဉ်ပါးသူများပင် ထိုတယောသံအား ကြားရသည့် အခိုက်တွင် ငြိမ်သက်ကာ နားဆင် နေကြမည်ဟု ထင်မိလေ၏။ ယခု ကဲ့သို့သော တိတ်ဆိတ်သော ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်မျိုးတွင် ကြယ်ရောင်များ ထွန်းလင်းနေသော လွတ်လပ် ကျယ်ပြောသည့် ကောင်းကင်ပြင်ကြီး၏ အောက်တွင် အဆိုပါ တယောသံအား နားဆင်ရသည်မှာ အလုံပိတ် ပြဇာတ်ရုံအတွင်း နားဆင်ရသည်ထက် ပို၍ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝပေလိမ့်မည် ဟူ၍လည်း ထင်မြင်မိလေ၏။
ရွက်လှရွာသား လူရွယ်တစ်စုနှင့် မျက်နှာစည်းနှောင်ထားသူ လူနှစ်ဦးတို့သည် တယောသံ ထွက်ပေါ်လာသောအခါတွင် ၎င်းတို့ အချင်းချင်း ပြောဆိုနေကြသည့် ရန်လိုသော စကားများအား ခေတ္တ ရပ်နားလိုက်ကြလေ၏။ ထို့နောက်တွင် ကိုခင် ဆိုသူမှ ဖိုးကျော် ဆိုသူအား တီးတိုး ပြောဆိုလေ၏။
“ဒီကောင်တွေကို သေနတ်နဲ့ မင်း ချိန်ထားလိုက်ဦး၊ ငါ တယောထိုးတဲ့လူကို သွားကြည့်လိုက်မယ်။”
ထိုအခါ ဖိုးကျော် ဆိုသူမှ ၎င်း၏ ဦးခေါင်းအား အသာဆတ်ပြလိုက်ပြီးနောက် ၎င်း၏ လက်အတွင်းမှ သေနတ်ဖြင့် လူရွယ်တစ်စုအား ချိန်ထားလိုက်လေ၏။ ကိုခင် ဆိုသူမှာလည်း ၎င်းတို့၏ ကျောဘက်၊ ရန်အောင် စေတီလေး၏ အရှေ့တောင် ခပ်ယွန်းယွန်းမှ ပေါ်ထွက်လာနေသည့် တယောသံ ကြားရာ အရပ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းသွားလေတော့၏။
“ဟေ့လူ … ခင်ဗျား လက်ထဲက သေနတ်က အတုလား၊ အစစ်လား”
မိုးကို ဆိုသူ ရွယ်မှ ၎င်းတို့အား သေနတ်ဖြင့် ချိန်ထားသူ ဖိုးကျော် ဆိုသူအား မေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထိုအခါ ဖိုးကျော် ဆိုသူမှ …
“အစစ်မှန်း အတုမှန်း သိချင်ရင် မင်းကို အစမ်း ပစ်ပြမယ်လေ၊ မကောင်းဘူးလား၊ ဟား .. ဟား ”
ဟူ၍ ပြောဆိုလိုက်သည်ကို တွေ့ရလေ၏။
“အစမ်းတော့ မပစ်ပြပါနဲ့ဗျာ၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရလို့ သေတဲ့လူဆိုပြီး ရွာထဲမှာ နာမည်ကြီးသွားပါဦးမယ်ဗျ၊ မဟုတ်ဘူးလား ဟေ့ကောင်တို့ရာ”
“အေး .. ဟုတ်တယ် မိုကိုရေ၊ နာမည် ကြီးမယ်ဆိုလည် မင်းတစ်ယောက်တည်း အကြီး မခံနိုင်ပါဘူး။ ငါတို့ပါ ပါမှာပေါ့ကွ”
ယင်းသို့ လူရွယ်တစ်စုမှ ၎င်းတို့ အချင်းချင်း ပြောဆိုလျက် ရှိနေကြစဉ်တွင် ဖိုးကျော် ဆိုသူမှ ပြောလေ၏။
“ဟေ့ကောင်တွေ၊ ယီးတီးယားတား တော့ လုပ်မယ် မကြံကြနဲ့နော့။ ငါ့ လက်ညိုးလေး တစ်ခါကွေးလိုက်ရင် အသက် တစ်ချောင်း ပါတတ်တယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ပါသွားတယ် မထင်နဲ့ဦး။ မချိမဆန့် ဝေဒနာတွေကို ခံစားရသေးတယ်ဆိုတာလည်း မှတ်ထားဦး .. ဟဲ .. ဟဲ”
“ဒီလိုဆို ခင်ဗျားကို မေးရပါဦးမယ် … ဒီဝေဒနာတွေက မြွေကိုက်ခံရတဲ့ ဝေဒနာတွေလောက် ပြင်းသလားဗျ”
ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်မှ ယင်းသို့ မေးလိုက်သော အခါတွင် ..
“ငါ့ကို အဲဒါတွေ လာမမေးနဲ့။ သိချင်ရင် ပစ်ပြမယ်”
ဟူ၍ ပြောဆိုကာ ၎င်း၏ သေနတ် ပြောင်းဝအား ရဲကြီး ဆိုသူ ဘက်သို့ ချိန်ထားလိုက်သည်ကို တွေ့ရလေ၏။ ထိုအခါ ရဲကြီး ဆိုသူ လူရွယ်မှာ ၎င်း၏ လက်အတွင်းမှ သစ်သားချောင်းအား အောက်သို့ ချလိုက်လေ၏။ ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်အား မြှောက်လိုက်ကာ ..
“ပစ်တော့ မပြပါနဲ့ဗျာ။ ကြောက်ပါတယ်ဗျ။ ကျုပ်က အဲဒီ ဝေဒနာမျိုးကို မခံစားဖူးချင်ပါဘူး။ အဲ … ဒါပေမယ့် .. ဒါပေမယ့်”
ဟူ၍ ၎င်း၏ စကားအား မဆက်သေးဘဲ မျက်နှာစည်းထားသူ ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ နောက်သို့ ကြည့်လိုက်ကာ ..
“ခင်ဗျားတော့ဖြင့် မြွေကိုက်ခံရတဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရတော့မယ် ထင်တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ နောက်မှာ မြွေဟောက်ကြီး …”
ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ ဖိုးကျော် ဆိုသူမှာ အတန်ငယ် လန့်သွားပြီးနောက် ၎င်း၏ နောက်သို့ ဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်လေတော့၏။ ထိုအခိုက်တွင် မိုးကို ဆိုသူ လူရွယ်မှာ ၎င်း၏ လက်အတွင်း ကိုင်ဆောင်ထားသော သစ်သားချောင်းဖြင့် ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ သေနတ်ကိုင်ထားသော လက်ဆီသို့ ပစ်ပေါက်လိုက်လေ၏။
“ဒုတ် ……… ခွပ် …….. အ ….”
အဖြစ်အပျက်မှာ မြန်ဆန်လှ၏။ သစ်သားချောင်းမှာ ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ လက်ကောက်ဝတ်အား ထိမှန်ကာ သေနတ် မှာလည်း မြေသို့ ပြုတ်ကျသွားလေ၏။ ထိုအချိန်နှင့် အံကိုက်ပင် လက်ကို မြှောက်ထားသော ရဲကြီးမှ ဖိုးကျော် ဆိုသူထံ ပြေးသွားကာ ၎င်း၏ ခြေထောက်ဖြင့် မြေပေါ်မှ သေနတ်အား ဖိနင်းရင်း ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ မျက်နှာအား ၎င်း၏ ခေါင်းဖြင့် တိုက်ချလိုက်လေ၏။ ကျန်လူရွယ် လေးယောက်မှာလည်း ရဲကြီးနှင့် မရှေးမနှောင်းပင် ရောက်လာပြီးနောက် ဖိုးကျော် ဆိုသူအား ချုပ်ထားလိုက်လေတော့၏။
“ဟေ့ကောင် .. သူ့ မျက်နှာဖုံး ဆွဲချွတ်လိုက်ကွာ။ ဘယ်သူလဲ သိရအောင်”
ယင်းသို့ ရဲကြီး ဆိုသူမှ ပြောလိုက်သော အခါ ငအောင် မှ ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ မျက်နှာတွင် စည်းနှောင်ထားသော ပဝါစ အား ဖြတ်ခနဲ ဆွဲယူကာ ဖြုတ်ချလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ လူရွယ်များမှာ ဖိုးကျော် ဆိုသူ၏ မျက်နှာအား အသေအချာ ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနောက် …
“ဟာ … ဒါ .. ငါတို့ရွာကို လာလာတောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစား မဟုတ်လားကွ။ တော်တော် ရိုင်းတာပဲကွာ”
ဟူ၍ အချင်းချင်း ပြောဆိုကြလေ၏။ ထိုအခိုက်တွင် …
“ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။ မင်းတို့ရွာထဲဝင်ပြီး တောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတောင်းစား အစစ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်က ဓားပြကွယ့်”
ဟူသော အသံတစ်သံသည် လူရွယ်တစ်စုနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ ထွက်ပေါ်လာလေ၏။ လူရွယ်များမှာ အဆိုပါ အသံပိုင်ရှင်အား အထူးအဆန်း သဖွယ် ကြည့်ရှုလိုက်လေ၏။ တစ်ယောက်သော သူရွယ်မှ ထိုအသံပိုင်အား ရိုးရိုး မြင်ရရုံဖြင့် အားမရသည့်ဟန်ဖြင့် ဓါတ်မီးအလင်းဖြင့် ကြည့်ရှုလိုက်သည်ကိုလည်း တွေ့ရလေ၏။
“ခင်ဗျားက ဘယ်သူတုံး။ ခင်ဗျားကို ကျုပ်တို့လည်း မမြင်ဖူးပါလားဗျ”
“ငါ့ နာမည် ဗြဟ္မာမောင်မောင် လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီလို ကောင်မျိုးတွေကို ကန့်လန့် တိုက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ ဆိုပါတော့ကွာ”
“နေစမ်းပါဦးဗျ။ ခင်ဗျားက စုံထောက်လား”
“မင်းတို့ ထင်သလို ထင်လိုက်ကြပေါ့ကွာ။ ဒါနဲ့ တောင်အောက်မှာ မင်းတို့ သူကြီးရယ်၊ ဘသာအောင်ရယ်၊ ရွာသားတွေရယ် စောင့်နေကြလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ သူ့ကို ထမ်းခေါ်ပြီး သွားလိုက်ကြ။ ငါလည်း တစ်ယောက်ကို သယ်ခဲ့ရဦးမယ်”
ဟူ၍ ပြောဆိုပြီးနောက် ဗြဟ္မာမောင်မောင် ဆိုသူမှာ ထွက်ခွာသွားလေ၏။ လူရွယ်တစ်စုမှာလည်း ၎င်းတို့ ဖမ်းမိထားသော ဖိုးကျော် ဆိုသူအား ဆွဲခေါ်ကာ တောင်အောက်သို့ ဆင်းသွားကြလေတော့၏။ ရန်အောင်တောင် အောက်သို့ ရောက်သောအခါတွင် ရွက်လှ ရွာသူကြီး၊ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်နှင့်အတူ ရွာသား ဆယ်ယောက်ခန့်ကို တွေ့ရလေ၏။ ထို့ထက် အခြားသော လူသုံးဦးကိုလည်း တွေ့ရလေ၏။
လူရွယ်တစ်စုသည် ၎င်းတို့ ဆွဲခေါ်လာသော ဓါးပြဆိုသူ ဖိုးကျော် အား သူကြီးတို့၏ လက်အတွင်းသို့ အပ်လိုက်ကြလေ၏။ လူရွယ်တစ်စုနှင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင် ဗြဟ္မာမောင်မောင် ဆိုသူမှာလည်း ရောက်ရှိလာပြီးလျှင် ၎င်း၏ ပုခုံးထက် ထမ်းလာသော သတိမေ့နေသည့် လူတစ်ဦးအား သူကြီး၏ ရှေ့သို့ ဝုန်းခနဲ ပစ်ချပေးလိုက်လေ၏။ ယင်းနောက် ဗြဟ္မာမောင်မောင် ဆိုသူမှ ဤသို့ ပြောလေသည်။
“ကဲ .. သူကြီး၊ ဒီငါးယောက်ကို ပုလိပ်လက်ကို သွားအပ်လိုက်ကြပါ။ ပုလိပ်က ဘယ်သူတွေလဲလို့ မေးခဲ့ရင် “ကြောင်နက် အုပ်စုပဲ” လို့ အဖြေပေးလိုက်ပါ။ ကျုပ် တာဝန် တစ်ခုတော့ဖြင့် ပြီးသွားပြီ။”
ယင်းသို့ ပြောလိုက်သောအခါ လူရွယ်တို့မှ မေးမြန်းကြလေ၏။
“ဒါနဲ့ တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။ တောင်ပေါ်မှာ တယောထိုးတာက ခင်ဗျားလားဗျ”
“ဟုတ်ပါတယ် ငါ့ညီတို့ရဲ့။ ဘာလဲ ..။ မင်းတို့က ဥစ္စာစောင့်တို့၊ သရဲတို့ ဆိုတာတွေ ထင်နေလို့လား”
“အဟဲ … ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ည လာချောင်းကြည့်တာပါ”
“ဒီတယောသံရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ငါ့ညီတို့ အတွက် မဟုတ်ဘူးကွ။ ဟောဒီက ကြောင်နက် အုပ်စု အတွက်ပဲ။ ဒီကောင်တွေက ရွာတွေကို လိုက်ပြီး ဓါးပြတိုက်နေတဲ့ ကောင်တွေ။ ဓါးပြ ဆိုပေမယ့် ပေါ့သေးသေး ဓါးပြတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုက မေ့နေတဲ့ လူဆိုရင် အတော် နပ်တဲ့လူပဲကွ”
ယင်းတို့ဖြင့် သူကြီးနှင့် ရွာသားများမှာ “ကြောင်နက်အုပ်စု” ဓါးပြများအား ပုလိပ်လက်သို့ အပ်နှံရန် ထွက်ခွာသွားကြလေ၏။ သူကြီး၏ မှာကြားချက်အရ လူရွယ်တစ်စုသည်လည်း ရွာဆီသို့ ပြန်သွားကြလေ၏။ အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်နှင့် ဗြဟ္မာမောင်မောင် ဆိုသူတို့မှာ ဦးသာအောင်၏ တဲကလေးဆီသို့ လျှောက်လှမ်းသွားကြလေ၏။
“မောင်ရင်ရဲ့ အကြံအစည်တွေကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ ကွက်တိကို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲလားကွယ့်”
“အဲဒီလောက်လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး ဘသာအောင်ရယ်။ ကျုပ်က ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာတွေကို တွေးပြီး လှုပ်ရှားရတာပါ”
“ဒါနဲ့ မောင်ရင်ကို မေးရပါဦးမယ်။ မနက်ဖြန် ညကျရင်ရော တောင်ပေါ်တက်ပြီး တယောထိုးဦးမှာလား”
“တောင်ပေါ် တက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး ခင်ဗျာ။ တယော ထိုးမယ့်ထိုးတော့ ဘသာအောင်ရဲ့ တဲကလေး အရှေ့ ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာပဲ အေးအေးလူလူ ထိုးတော့မယ်ပေါ့ဗျာ .. အဲဒါဆို ဘသာအောင်လည်း နီးနီးကပ်ကပ် နားထောင်လို့ ရတာပေါ့”
“ဟာ .. ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ ပိုကောင်းတယ်။ ဟား .. ဟား … ဟား …”
အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်မှ ယင်းသို့ ဗြဟ္မာမောင်မောင်၏ စကားအား သဘောကျစွာ ရီမောလိုက်သကဲ့သို့ ဗြဟ္မာမောင်မောင်မှာလည်း အဖိုးကြီး ဦးသာအောင်အား ကြည့်ကာဖြင့် ၎င်း၏ မျက်နှာတွင် ပြုံးယောင်သန်းလာသည်ကို ညခင်း ကြယ်အလင်းဖြင့် ခပ်ရေးရေး မြင်တွေ့လိုက်ရလေတော့သတည်း ……..။
လာရောက် ဖတ်ရှုသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါ၏ ….။
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged မဟာရာဇာ အံစာတုံး, ဝတ္ထုတို. Bookmark the permalink.
← သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း
တစ်စုံတစ်ခုဟာ … →